Ny fiantraikan’ny adin’i Rosia sy Okraina amin’ny fifandraisan’i Etazonia sy Venezoelà · Global Voices teny Malagasy
Mety hitondra amina fifandraisana tsy ampozina ny olan'ny tsy fahampian-tsolika
Voadika ny 31 Marsa 2022 20:22 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Português, українська, عربي, English
Ny filoha venezoeliàna Nicolas Maduro (Wikimedia commons, CC BY 4.0), ny filoha amerikàna Joe Biden (Wikimedia commons, CC BY 3.0 US). Sary nafangaron'ny Global Voices.
Nitondra fiantraikany nahazendana eo amin'ny fifandraisan'i Etazonia sy Venezoelà, firenena roa any amin'ny tendron'izao tontolo izao, ny fisian'ny fananiham-bohitra rosiàna ao Okraina. Tamin'ny 8 Martsa, nambaran'ny filoha amerikàna Joe Biden ny fandraràna ny fanafarana solika, entona ary vokatra hafa rosiàna, raha ireo firenena hafa Tandrefana kosa nanambara ny fikasàny hampihena ny fiankinandoha amin'ny loharanon'angovo avy any Rosia rehefa nandeha ny fotoana. Noho ny tsy fahampian'ny famatsiana angovo avy any Rosia sy ireo tsy fahavitàna na tsy fahavononan'ireo firenena tena mpamokatra solika mpikambana ao amin'ny OPEP hanentsina ilay fahabangàna, mitohy miakatra ny vidin'ny solika sy ny entona.
Ho setriny avy hatrany tamin'ilay fandraràna, niantso ny indostrian'ny solika amerikàna ny fitondran'i Biden mba hampitombo ny famokarana, saingy ny fifangaroan'ireo olan'ny tambajotram-pitsinjaràna, ny tsy fahampian'ny mpiasa, sy ny tsy fampiasàna vola loatra taminy dia midika fa tsy ho vitan'ny indostria amerikàna ny hamaly ato anatin'ny fotoana fohy ilay fangatahana. Mba hanentsenana io filàna io, raha ny fahitàna ny zavatra rehetra dia nitady ilay mpiaramiasa tsy noeritreretina mihitsy ny governemanta Biden, Venezoelà.
Famintinana ny fifandraisan'i Etazonia sy Venezoelà
Efa hatramin'ny 1835 i Etazonia sy Venezoelà no nanana fifandraisana diplaomatika, saingy nisy ny fihenjanana tsy takona nafenina fony fitondràn'i filoha taloha, Hugo Chávez. Vao mainka niharatsy ny fifandraisana teo ambanin'ny fitondràn'ilay nisolo azy, Nicolás Maduro, noho izay lazain'i Etazonia ho famoretana tsy mitsaha-mitombo atao amin'ny mpanohitra, ny media, ary ny fiarahamonina sivily, ary noho ny fanoherana Venezoeliàna an'izay rehetra heveriny ho toy ny teti-panoron’ny imperialista amerikàna. Na teo aza io, notazonin'ny andaniny sy ny ankilany nandritry ny taona maro ny fifandraisana ara-toekarena matanjaka, ary nekena ny maha-iray amin'ireo mpiaramiasa ara-barotra mavesadanja indrindra an'i Etazonia ao Venezoelà, nanafatra solika maherin'ny 40 lavitrisa dolara amerikàna hatramin'ny 2007, tanatina fifankalozana ara-bola nihoatra ny 50 lavitrisa dolara nifanaovan'ny roa tonta.
Tamin'ny 2008, napetrak'i Etazonia ny voalohany tamin'ireo sazy marobe avy aminy ho setrin'izay lazainy fa fanitsakitsahana zon'olombelona ary kolikoly raiki-tampisaka ataon'ny governemanta venezoeliàna sy ireo olom-panjakana venezoeliàna sasany. Niharatsy tsikelikely ny fifandraisana mandra-panapak'i Maduro tamin'ny fomba ôfisialy ny fifamatorana diplaomatika tamin'i Etazonia tamin'ny Janoary 2019, fony naneken'ny filoha teo aloha Donald Trump an'i Juan Guaidó, filohan'ny mpanohitra, ho toy ny filoham-pirenena vonjimaika tao amin'ny firenena.
Tranga vao haingana
Araka ny lazain'ny New York Times, tomponandraikitra amerikàna ambony niisa roa no nisidina nankao Venezoelà hitarika ny fifampiresahana amin'ny governemantan'i Maduro tamin'ny fiandohan'ny Martsa. Ireo manampahaizana manokana dia nandika azy io ho toy ny fikatsahan'ny fitantanan'ingahy Biden hamerina ny fifandraisana amin'i Venezoelà ary efa naneho sahady ny fahalinany itsy farany. Tanatin'ny toa fanehoana sahady ny fahavononany, ary herinandro monja taorian'ny nanaovana ilay fifampiresahana tamin'ny iraky ny governemanta amerikàna, namotsotra teratany amerikàna roa voafonja tao aminy ny governemanta ao Venezoelà. Nambaran'ny governemantan'i Maduro ihany koa ny drafitra ho fanohizana ny fifampiresahana miaraka amin'ireo mpanohitra.
Feno fanakianan'ny tontolo pôlitika avy amin'ny andaniny roa raha ireo fanehoankevitra momba ny toa fiovàna fijery ataon'ny filoha Biden manoloana an'i Venezoelà. Nosokajian'ireo mpandalina ao Etazonia ho fihatsarana ivelan-tsihy, fitiavantena, ary tsy amin-kitsim-po ireo hetsika ataon'ny fitondràna, indrindra fa tany am-boalohany izy dia nanohy ny pôlitikan'ny fihenjanana nanoloana ny governemantan'i Maduro izay nizoran'ny filoha Donald Trump.
Ao amin'ny media sôsialy, nokianin'ireo Venezoeliàna ihany koa ilay fihetsika, ka olona iray no nilaza fa tian'ireo Venezoeliàna i Etazonia mba hanampy amin'ny ‘fanilihana an'i Maduro, fa tsy hoe hividy solika’, raha ireo hafa ao Amerika Latina indray maneso an'i Etazonia satria heverin-dry zareo ho toy ny diso fihetsika noho ny toerana nisy azy tany aloha momba ny sosialisma. Fomba fijery mitovitovy amin'izany daholo no ankamaroan'ireo fanehoankevitra ao amin'ny media sôsialy.
Tsy Etazonia mividy solika ao Venezoelà no tadiavin'ireo Venezoeliàna, na hoe tianay ny hanesorana ny sazy, tsia.
Tianay hanampy anay ry zareo mba hanilika an'i Maduro sy ny tariny, indray mandeha tsy miverina.
Nanamafy ireny fihetsehampo ireny ilay mpitarika ny fanoherana, Juan Guaidó, izay nandà ny fanalefahan-tsazy, tamin'ny nanoratany tao anaty taratasim-pifandraisana iray fa ilaina ny “hisian'ny tena fandrosoana mankany amin'ny demaokrasia ary ny fahalalahan'i Venezoelà” alohan'ny mety hisian'izany. Etsy ankilany, ireo solontena avy ao anivon'ny governemantan'i Maduro dia nanohana ireo fifampiresahana, saingy nanao tsindry ny amin'ny hanesorana ireo sazy sy ny fanekena amin'ny fomba ôfisialy ny maha-filohampirenena an'i Nicolás Maduro ho ampahany amin'ny dingana.
Hatramin'ireny fivoaran-draharaha ireny, nolavin'ny governemantan'i Biden ny hoe mitady izay hanovàna ny pôlitikany manoloana an'i Venezoelà izy, manampahefana ambony iray avy ao amin'ny fitondràna no nilaza fa ireo fifampiresahana atao miaraka amin'ny governemantan'i Maduro dia mba hiantohana ny famotsorana soa aman-tsara ireo gadra sy ho famporisihana ireo fifampiraharahàna iarahany amin'ny fanoherana ao Venezoelà.
Ny manampahaizana sasany dia miantso an'i Etazonia mba hampitombo ny famokarana solika ao aminy ihany, saingy tsy mora toy izany akory ny vahaolana. Etazonia no efa mpamokatra lehibe indrindra ny solika tsy voahodina eto amin'izao tontolo izao, ary izy koa no mpanjifa lehibe indrindra eto an-tany. “Maivana kokoa sy tsy mitovy amin'ny” solika ampiasain'ny firenena raha ny solika vokarin'i Etazonia. Araka izany, vina manahirana ny momba ny fiankinandoha ara-angovo. Nilaza i Kanadà fa vonona ny hampitombo ny habetsahana solika mikoriana mankany Etazonia amin'ireo fantsona lehibe avy any aminy, saingy misy fetrany koa io. Toy ireo firenena ao amin'ny OPEP ihany, marobe ireo mpamokatra no naneho ny tsy fahavononany hampifanitsy ny tanjon-dry zareo sy ireo drafitra famoahambola mba hampitomboana bebe kokoa ny vokatra, ary dia mbola hila misimisy kokoa hatrany i Etazonia. Amin'io lafiny io, mitombina be ny ezaka miharihary ataon'ny filoha Biden handangolango ny governemanta venezoeliàna, na eo aza ny fanakianana.
Voatosi-bohon-tànana ny governemanta amerikàna, ary misy ambana (risk) avokoa ireo safidy rehetra ataony. Ny fandrisihana ny fampitomboana ny famokarana solika mba hanentsenana ny tsy fahampian'ny famatsiana no mety hahatratrarany ao anaty fotoana fohy ny tanjony ho fampidinnaa ny vidin'ny entona, nefa hisy fiantraikany ao anatin'ny fotoana maharitra amin'ny resaka angovo madio izany. Etsy ankilany, ny fampanarahana fenitra ny fifandraisany amin'i Venezoelà dia horaisin'ny maro ho toy ny fanekena an-kolaka ny governemanta iray izay izy Etazonia mihitsy no tsy manaiky azy ho ara-drariny.
Raha mila vaovao misimisy kokoa momba ity lohahevitra ity, jereo ny fandrakofanay manokana ny Rosia manani-bohitra ao Okraina [Angl.].